Office Trainee | Shwe Taung Por Group of Companies Limited. ﻿
28.3.2019, Full time , Construction / Building
Company: Shwe Taung Por Group of Companies Limited.
•	ကွန်ပျုတာ DTP ကျွမ်းကျင်သူဖြစ်ရမည်။
•	ဌာနဆိုင်ရာသို့ သွားရောက်ဆက်သွယ်နိုင်သူဖြစ်ရမည်
Work location အမှတ် ၆၅၂ ၊အခန်း နံပါတ် ၂၀၁-၂၀၂၊ပြည်သာယာလမ်း၊သင်္ဃန်းကျွန်း မြို့နယ်၊(ဇ၀နမှတ်တိုင်အတိုင်အနီး)
Company Industry: Office Trainee
Job posted: 28/3/2019
Shwe Taung Por Group of Companies Limited.
•	လူမှုဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ပြီး ကြိုးစားလိုစိတ်ရှိ၍ စိတ်ရှည်သည်းခံမှုရှိသူ၊ အသင်းအဖွဲ့နှင့် လိုက်လျောညီထွေ လုပ်ကိုင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
Bar & Club Manager
327 Days, Full time , Construction / Building
Office Trainee Admin, Secretarial & PA jobs Joblesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss JobsInYangon Shwe Taung Por Group of Companies Limited. Admin, Secretarial & PA jobs Admin, Secretarial & PA jobs Office Trainee Jobs in Myanmar, jobs in Yangon
United Living Mall
Yangon (Rangoon) 229 Days
Yangon (Rangoon) 362 Days